Iwo gumi akanakisa emitambo yenhabvu isina Internet kubatana - Gadget Nhau | Gadget nhau
Iyo gumi yakanakisa nhabvu mitambo isina Internet, yeIOS uye Android
Laliga Santander yoda kutangazve uye sutu yenhabvu yatanga kuratidza, tinogona kutora mukana wayo kudziisa injini dzedu. Pakati pa2020, kutamba mutambo wevhidhiyo wega kushoma uye kushoma, asi isu hatidi nguva dzose kukwikwidzana nevamwe vatambi uye isu hatina mukana wekubatana neinternet kuita izvozvo. Chinhu chakakosha sekutamba nhabvu mitambo isina internet ichiri kugona.
MuGoogle Play kana paAppStore pane huwandu hwakawanda hwemitambo yenhabvu, mazhinji acho akasununguka asi anoda kubatana zvachose kune internet, zvichikutadzisa kupinda mukati mawo kana uchinge usisina data kana WiFi, mhinduro chete ndeyekuti uve nemitambo yakasiyana yaunogona kutamba pasina kubatana ikoko. Muchikamu chino tichaita muunganidzwa wezvakanakisa zviripo zve smartphone kana piritsi.
1 Chinyorwa cheiyo gumi akanakisa emitambo yenhabvu isina internet yeIOS uye Android
1.1 FiFA nhabvu
1.3 Kurota League Soccer
1.5 Nhabvu Star 2020 Yepamusoro Leigi
1.6 Mutambi wenhabvu 2020 Mobile
1.7 Yekupedzisira Kick 2019
1.9 Nhabvu Mukombe 2020
1.10 Retro Nhabvu
Chinyorwa cheiyo gumi akanakisa emitambo yenhabvu isina internet yeIOS uye Android
Tine mazita mazhinji anoenderana nechinodiwa ichi, ese anoshanda pasina dambudziko, kubvira akaiswa zvizere mundangariro ye smartphone yedu. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti dzinenge dzese dziripo kune ese iOS uye Android. Isu tinotora mukana uno kukuyeuchidza kuti nguva pfupi yadarika takaburitsa chidzidzo che kunatsiridza mashandiro emitambo pane Android.
Mambo wemadzimambo hapana mubvunzo kuti "Iyo FIFA", mutambo wakawana chigaro chayo mumutambo chaiwo wakanaka. Yakagadzirwa uye yakagadzirirwa neEE Sports, inozivikanwa nehunhu hwayo isingarambike pazvinyaradzo kana inoenderana, iri zvakare imwe yemitambo yepamusoro yenhabvu yemafoni nhare. Iine marezinesi ese akachengetwa uye ekuva nawo mupasi rino, kungave zvikwata kana vatambi.
Iyo ine Gameplay yakatosiyana pane yatinowana mune yayo console vhezheni, mutambo wemutambo unokwevera zvimwe kudivi reArcade kupfuura nekunyepedzera. Chinhu chakanakisa pamusoro peshanduro iyi ndechekuti ine iyo "Yekupedzisira Timu" maitiro ayo anotibvumidza isu kunakidzwa nekufambira mberi kwechikwata chedu, kusaina vatambi. Iyo yemahara-yekutamba, saka kurodha kwayo kunenge kuri mahara pamwe nemukana wekutenga-mukati-app.
Mukugadziri: ELECTRONIC ARTS
Iye zvino taenda nemusoro wezita unoshandura chigaro neFIFA, hapana chimwe asi ingano yePES, franchise inoedza kuenderera gore rega rega nekugadzirisa Gameplay, asi yakarasikirwa nemhepo kana zvasvika kune marezinesi. Kunyange chiri chokwadi kuti iyi vhezheni yefoni nhare ine chinoshamisa tekinoroji chikamu, chinofadza munhu wese anotamba.
Tine Gameplay yakafanana neFIFA, kudhirowa kune yakatarwa Arcade chimiro. Kunyangwe hazvo chinangwa chedu chiri chekutamba ndega, tichava nemutambo wakawanda wevakawanda wevatambi, kusanganisira maaligi emuno neshamwari dzakabatana kuburikidza neBluetooth kubatana.
Kurota League Soccer
Iwo maviri titans haakwanise kuvhiringidzika, nekuti kune hwakawanda hupenyu shure kwavo, ndeimwe yemitambo yakakwenenzverwa yepamusoro pane ese iOS uye Android. Inobatanidza yakanaka Gameplay, dzinokatyamadza Graphics uye marezinesi. Izvi zvinoguma ne nhamba huru yeligi, zvikwata uye vatambi.
Wide akasiyana emitambo modes, pakati payo ndiyo inopa kukosha kumutambo, uko isu tine rusununguko rwekugadzira yedu yega "Yechikwata Chekurota". Pamusoro pezvo isu tichavawo nekugona kune yevazhinji mode kana tichida. Yako iOS vhezheni inotimanikidza kuti tibatanidzwe, kunyangwe saka ini ndinosiya chinongedzo.
Register QR kodhi
Mukugadziri: Kutanga Kubata Mitambo Ltd.
Kurota League Soccer 2021
Iri zita rakagadzirwa uye rakaburitswa neGameloft raigona kushaikwa. Iyo yemahara yemahara simulator, mairi Tinogona kugadzira yedu yega timu, kusaina vatambi kana nhengo dzevadzidzi.
Tichava nemukana wekuvaka medu guta remitambo uye tichirivandudza zvishoma nezvishoma, mune ino kesi hatinakidzwe nemhando yevatambi yevakawanda, kunyangwe isu tine zvakakwana zvekunze zvekusatadza.
Mukugadziri: Gameloft SE
Yechokwadi Nhabvu Mutambo 2020
Mukugadziri: Muhammad Asif
Nhabvu Star 2020 Yepamusoro Leigi
Pano tinowana zita rinotarisa chete kumaligi enyika dzakasiyana, zvichitibvumidza kutora chikamu mune ese iwo. Tinogona kutanga basa redu seyakajairwa gamer kupedzisira tave hombe nyeredzi, kukwikwidza mumakwikwi akanakisa pasi rese.
Pamusoro penhandare yemitambo, isu tichafanirwa kuenda kune yakasarudzika, kwatinogona kutenga dzimba kana mota. Zvakare nekuhaya vako varairidzi kuti vatibatsire mukufambira mberi kwedu.
Nhabvu Star 2021 Yemahara Leigi: Akanyanya Nhabvu Mutambo
Mukugadziri: Viva Mitambo Studios
Nhabvu Star 2021 Yemhando yepamusoro
Mukugadziri: Dzorera Mitambo
Mutambi wenhabvu 2020 Mobile
Yakasarudzika pakati pechinyakare. Hausi mutambo wenhabvu wenguva dzose seFIFA kana PES, mune ino kesi mutambo wekushandisa zviwanikwa, zvese zvehupfumi nemitambo. Isu tinotora itsvo dzechikwata semumiriri wepamusoro uye basa redu rinenge riri rekuenda naro kumusoro.
Iyi SEGA yakasarudzika ndeye inowanikwa zvese zviri zviviri Android uye iOS nemutengo we € 9,99Pakutanga zvinogona kutaridzika kunge zvinodhura, asi huwandu hwemaawa atinogona kuisa mari hunoruramisa. Ini ndinokurudzira kuongorora usati watarisa GamePlay kuti uwane pfungwa yezvainopa.
Nhabvu maneja 2020 Nhare
Yekupedzisira Kick 2019
Imwe zita rekuti tisingatambe netsika yechinyakare, kupi chinangwa chedu ndechekutamba nekuhwina maround akasiyana emapenalt, nezvikwata zvakanakisa pasi rese. Iyo ine zvese zviri pamhepo uye online modhi, ichikubvumidza iwe kutamba neshamwari.
Haisi mubvunzo mutambo wakareruka pane rese runyorwa, uko chero mutambi anogona kushanda zviri nyore zvisinei nezera kana kugona.
Yekupedzisira kick 2019: Yakanakisa online online bhora
Mukugadziri: Ivanovich Mitambo
Yekupedzisira Kick: Online nhabvu
Mumutambo uyu apo protagonist asiri iye wenhabvu, asi murairidzi. SaManeja wenhabvu, isu tinowana iyo manejimendi vhidhiyo mutambo, kwatinogona kutarisana nechirongwa chekirabhu diki kuti ishandure ive hombe. Izvo zvinovimbisa isu nhamba hombe yemaawa evaraidzo.
Ndiwo mutambo wakawana hombe mushandisi base nekuda kwekuita kwayo kwakanaka. Tinogona kudzora zvese zvinoitika, zvese zvemitambo uye nehupfumi.. Dhizaini yejezi, vatambi, mafomu, mari kana nhandare pachayo.
Wepamusoro Gumi neimwe 2021: Soccer Manager
Pamusoro gumi nerimwe: Soccer Manager
Nhabvu Mukombe 2020
Soccer Cup mutambo wenhabvu unonakidza, kwatichafanirwa kukunda mhando dzese dzezvinetso zvatinozovhura patinotamba. Mutambo ndeimwe yeanorema zvakanyanya maererano nendangariro uye zvehunyanzvi zvinodiwa. Izvi zvinoreva kuti ichashanda chaizvo fluid kunyangwe mune yekuisa chiyero.
Tichava nemaitiro emabasa ekufambira mberi nekuvandudza timu yedu. Mutambo ndeimwe yeanonyatsoitika maererano nekuenzanisa.
Nhabvu Mukombe 2021: Nhabvu Mitambo
Mukugadziri: INLOGIC SPORTS - nhabvu tenesi gorofu nhabvu
Nhabvu Mukombe 2021
Mukugadziri: Inlogic Software sro
Kupedza uyu muunganidzwa, tiri kuenda nemutambo unonakidza pamwe neyakajairika. Retro Soccer mutambo we nhabvu ine chitarisiko chisiri chechokwadi asi chine mavara. Iyo ine Arcade yakanyanya uye yakapusa Gameplay kune vese vateereri.
Inotarisana nemhando dzakasiyana dzemitambo, kusanganisira mitambo yeligi kana matambudziko emunhu.
Retro Soccer - Arcade Nhabvu
Mukugadziri: Nharembozha Yemitambo Studios Ltd.
Mukugadziri: Mobile Kutamba Studios
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Iyo gumi yakanakisa nhabvu mitambo isina Internet, yeIOS uye Android
ASUS ZenBook Duo: Iyo mbiri-screen laptop kubva mune ramangwana
Maitiro ekupfuudza zvinyorwa neruoko wakananga kukombuta yako neGoogle Lens